Kaominina Ivato : nizarana “kit scolaire” ny zanaky ny mpiasa | NewsMada
Kaominina Ivato : nizarana “kit scolaire” ny zanaky ny mpiasa
Manodidina ny 700 ireo zanaky ny mpiasa ao amin’ny kaominina Ivato no nizaran’ny ben’ny Tanàna Randrianarisoa Penjy fitaovam-pianarana omaly. Nahitana kahie, penina, penisilihazo, gaoma… ny fitaovana nozaraina.
Tanjona ny fitsinjovana ireo ray aman-dreny amin’izao ankatoky ny fidiran’ny mpianatra izao. “Iaraha-mahalala ny fiakaran’ny vidin’ny fitaovan’ny mpianatra isan-taona. Tsy azo hodian-tsy hita koa ny fahasahiranana ka izany indrindra ny anton’ny fandraisana anjara atao amin’ireo mpiasa toy izao”, hoy ny ben’ny Tanàna.
Nambarany ihany koa fa mandray anjara feno amin’ny fampandrosoana ny kaominina avokoa ny mpiasa rehetra ary antoka mampihodina ny raharaham-bahoaka izy ireo ka mendrika ny tolo-tanana hampaherezana azy hitombo hatrany amin’ny asa fanompoana ny vahoaka eto Ivato.
Tsy mitarain-tana-miepaka ny mpiasan’ny kaominina eto Ivato amin’ny fampandrosoana ny Tanàna. Miara-mientana maneho firaisankina amin’ny asa atao ary mifanampy amin’ny ben’ny tanàna amin’ny fanatanterahana ireo asa marolafy.
Nanolotra mari-pankasitrahana ny ben’ny Tanàna ireo zanaky ny mpiasa ho fisaorana amin’izao fanampiana izao. Tsy mijanona eo fa mbola hitohy ny asa sosialy ataon’ny kaominina amin’ireo mpiasa ao aminy.
Nampahafantarina ny mpiasa omaly koa ireo asa rehetra hatomboka amin’ity herinandro ity. Anisan’izany ny fananganana ny Tranompokonolona vaovao ao Ankadindravola, ny fananganana ny EPP vaovao ahitana efitrano enina ao Tanambao, fanamboarana ny lalana ao amin’ny K7, ny lalana any Andraondrikely sy Ankadindravola.
Nanentana ny mpiasa ny ben’ny Tanàna mba samy hazoto amin’ny asa ary tsy hikely soroka amin’ny andraikitra napetraka aminy avy.